Trump:Xiriir fiican lama yeelan doono Cameron - BBC News Somali
Trump:Xiriir fiican lama yeelan doono Cameron
Image caption Trump iyo Cameron
Donald Trump oo doonaya inuu noqdo musharraxa Xisbiga Jamhuuriga ee madaxtinimada Maraykanka ayaa sheegay inuusan filayn inuu xiriir wanaagsan la yeesho David Cameron haddii uu nodo madaxweynaha Maraykanka.
Bishii december ayuu Mr Cameron ku tilmaamay Trump inuu yahay nin wax kala qaybiya, oo doqon ah, oo khaldan, markii uu trump sheegay inuu si ku meel gaar ah muslimiinta uga mamnuuci doono inay soo galaan Maraykanka.
Donald Trump wuxuu kaloo ku xujeeyey duqa cusub ee magaalada London Sadiq Khan tijaabo xagga caqliga ah, ka dib markii uu sadiiq Khan sheegay in Trump uu jaahil yahay.
Khan waxa uu sheegay in uusan tagayn Mareykanka oo uu xukumo Trump, sababo la xiriira caqiidadiisa, waxa uuna ku gacan seyray hadal ka soo yeeray Trump oo ahaa in isaga uusan ku jirin Muslimiinta Mareykanka laga celinayo.
Trump wuxuu sheegay in uu arrintaas aad uga xumaaday.